Bollywood – Family Of Films
Raj_Mahal_3_(Dhilluku_Dhuddu)_2017 မြန်မာစာတန်းထိုး Translated by Myint Thu Encoded by Thet Paing Oo 720p HD 819.25 MB (openload)
No Entry (2005) မြန်မာစာတန်းထိုး
No Entry (2005) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 6.6/10 Google User 78% Genre: Comedy, Drama, Musical Run Time:2hours 38 mins No Entry (2005) သည် IMDb 6.6 Google User 78% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Anees Bazmee ကိုယ်တိုင်ရေးသား ရိုက်ကူးထား၍ သရုပ်ဆောင် Anil Kapoor, Salman Khan, Fardeen Khan တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Drama, Musical ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့်တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Kishen သည် သတင်းစာထုတ်ဝေနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Kaajal နဲ့ လက်ထပ်ထားသူဖြစ်သည်။ Kaajal သည် သူမ၏ယောကျာ်းကို အမြဲသံသယရှိသူဖြစ်သည်။ Pooja သည် သူမယောကျာ်းPrem အပေါ်ကို အရမ်းကို ယုံကြည်သူ ဇနီးမယားတစ်ဦးဖြစ်သည် Kishen နဲ့ Prem တို့သည် အရမ်းရင်းနှီးသော သူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသည် Sanjana သည် Prem ...
DJ: Duvvada Jagannadham (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
DJ: Duvvada Jagannadham (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 5.4/10 Google User : 85 % Genre: Action, Comedy, Thrilller Run Time:2hours 27 mins မင်းသားကြီး Allu Arjun သရုပ်ဆောင်ထားသည့် Hindi ဇာတ်ကြမ်း ဒုစရိုက်မှုများကို မုန်းတီးတတ်ပြီး မဟုတ်မမှန်လျှင် ငြိမ်မနေတတ်သည့် DJ ဆိုသောကောင်လေးမှာ ရဲအရာရှိတစ်ဦးနှင့် တရားဥပဒေအပြင်မှ ရာဇဝတ်သားများကို ပညာပေးရန် တိုင်ပင်ထားခဲ့သည်။ DJ ကြီးလာသောအခါ အများရှေ့မှောက်တွင် ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသော စားဖိူမှူးအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီး နောက်ကွယ်တွင် ရာဇဝတ်သားများကို သုသင်လျက်ရှိသည်။ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ကြိုတင်ငွေယူထားသော Argo diamond ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပ ဏီမှ ငွေများပျောက်ဆုံးနေသောအခါ.... ငွေဆုံးရှုံးထားသော ပြည်သူများအား မည်သို့ မည်ပုံ ပြန်ပေးမယ်ဆိုတာကို.. Reviewed By Rainbow Maung Translated by Rainbow Maung Encoded ...
Bajrangi Bhaijaan (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Bajrangi Bhaijaan (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 8.1/10 Rotten Tomatoes 100% Google User : 89 % Genre: Action, Comedy, Drama Run Time: 1 hour 36 mins ဒီကားလေးကို ကြည့်မိတိုင်းသဘောကျမိတယ် လူမျိုးဘာသာမရွေးကူညီတတ်တဲ့မေတ္တာတရားကို ဖော်ကြူးသွားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ ကြည့်ဖူးများလည်း ပြန်ကြည့်ရအောင် မကြည့်ရသူများလည်း ကြည့်ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ… Bajrangi Bhaijaan (2015) သည် IMDb 8.1 Rotten Tomatoes 100% Google User 89 % ဒါရိုက်တာ Kabir Khan ရိုက်ကူးထား၍ Vijayendra Prasad, Vijayendra Prasad တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားထား သရုပ်ဆောင် Salman Khan, Kareena Kapoor Khan, Nawazuddin Siddiqui တို့ ...
John Day (2013) မြန်​မာစာတန်းထိုး
John Day (2013) မြန်​မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 5.6/10 Google User : 80% Genre: Drama Run Time:2hours 18 mins John Day (2013) သည် IMDb 5.6 Google User 80% ဒါရိုက်တာ Ahishor Solomon က ရိုက်ကူးထား၍ Kartik Krishnan (dialogue), Ahishor Solomon တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ သရုပ်ဆောင် : Naseeruddin Shah, Randeep Hooda, Taran Bajaj တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Drama ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. John Day သည် ဘဏ်မန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူရဲ့မိန်းမ Maria Day နဲ့ အတူနေကြသည် သူတို့စုံတွဲမှာ မကြာသေးခင်ကပျောက်သွားသော ...
Kantri (2008) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Kantri (2008) မြန်​မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 5.2/10 Genre: Action Run Time:2hours 46 mins အိန္ဒိယဇာတ်ကြမ်းကားမှ ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူများအတွက် နှစ်ခြိုက်မယ့် Junior N.T.R ရဲ့ IMDb 5.2 ရထားတဲ့ Kantri (2008) ဒါရိုက်တာ Meher Ramesh ဇာတ်ညွှန်း Meher Ramesh စကားပြော Meher Ramesh တို့ရေးသားထားတဲ့ : Junior N.T.R., Hansika Motwani, Tanishaa Mukerji တို့အပီအပြင် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အိန္ဒိယအက်ရှင်ကားကောင်းလေးပါ… နိုင်ငံခြားမှာ ချမ်းသာလာပြီး မိမိရဲ့ရွာအတွက် စက်ရုံဆောက် တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ပြန်လာတဲ့သူတစ်ယောက် မမျှော်လင့်ဘဲ ယုံကြည်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ နောက်ကျောဓါးနဲ့ထိုးသလိုဖြစ်ရပ်ကို ကြုံလိုက်ရတဲ့အခါ ထိုယုတ်မှာသော သူငယ်ချင်း အဆမတန်ချမ်းသာသွားသော်လည်း နောက်ဆုံး လူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလမ်းကို Kantri ဆိုသော လူငယ်လေးက ပို့ဆောင်မလဲ ...
Ghayal Once Again (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Ghayal Once Again (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 6.5/10 Google User 82% Genre: Action, Adventure Run Time :2hours7minutes Ghayal Once Again (2016) သည် IMDb 6.5 Google User 82 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ Sunny Deol ရိုက်ကူးထား၍ Shaktimaan Talwar , Sagar Pandya တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Sunny Deol, Soha Ali Khan, Om Puri တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. သူ့ဆရာရဲ့ လူသတ်မှုဗီဒီယိုကို ကြည့်ပြီးတဲ့နောက် စုံထောက်ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက် အဲ့ဒီတာဝန်ရှိသူတွေကို ရှာဖို့ လှုပ်ရှားမှုစလုပ်ခဲ့ရာ ...
Krrish (2006) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Krrish (2006) မြန်​မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 6.3/10 Rotten Tomatoes : 100% Google User : 74 % Genre:Action, Adventure, Fantasy Run Time:2hour 34 mins Krrish (2006) သည် IMDb 6.3 Rotten Tomatoes 100% Google User 74 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ : Rakesh Roshan က ရိုက်ကူးထား၍ Robin Bhatt , Sachin Bhowmick တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ သရုပ်ဆောင် Rekha, Hrithik Roshan, Priyanka Chopra တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Fantasy ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Krrish လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက် ဆူပါပါဝါစွမ်းအားရှိနေပြီး ...
Bhagam Bhag (2006) ) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Bhagam Bhag (2006) မြန်​မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 6.4/10 Google User : 84 % Genre: Comedy, Mystery, Romance Run Time:2hour 37 mins Bhagam Bhag (2006) သည် IMDb 6.4 Google User 84 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ : Priyadarshan က ရိုက်ကူးထား၍ Neeraj Voraတို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ သရုပ်ဆောင် Akshay Kumar, Govinda, Paresh Rawal တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Mystery, Romance ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ဇာတ်လမ်းကပြမယ့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် လူသတ်မှုတစ်ခုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မိ၍ ဒုက္ခရောက်ကြလေသည်..သူတို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေကြောင်းကြံတတ်သည့် မင်းသမီးပါ ထိုလူသတ်မှုနှင့် ပတ်သတ်နေသောအခါ ပိုဆိုးရွားသောအဖြစ်အပျက်များကို ...
Bhoomi(2017) မြန်​မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings:5.4 Genre:Action,Drama Run Time:136mins Released Date:22nd Sep 2017 မင်းသားကြီး ဆန်​​ဂျေးရဲ့ အက်​ရှင်​ကား တစ်​ကားနဲ့ မိတ်​ဆက်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ ဖိနပ်​ဆိုင်​ပိုင်​ရှင်​ Arun(အာရွန်း)မှာ Bhoomi(ဘိုမိ)ဆိုတဲ့ မိတဆိုးမ​သမီးလေး တစ်​​ယောက်​ရှိတယ်​ ငုံထားမတတ်​ချစ်​ရတဲ့ သမီး​လေးမို့Arunတစ်​​ယောက်​ အိမ်​​ထောင်​မပြုပဲ ​ကျွေး​မွေးပြုစုလာခဲ့ရတာပါ အရွယ်​​ရောက်​လို့ သမီး​လေးကို အိမ်​​ထောင်​ချ​ပေးဖို့ ပြင်​ဆင်​​နေစဉ်​ မင်္ဂလာပွဲမတိုင်​ခင်​ တစ်​ရက်​အလိုမှာပဲ Bhoomi ကို တစ်​ဖက်​သတ်​ကြိုက်​​နေတဲ့ Vishal ရယ်​ သူ့ အကိုတစ်​ဝမ်းကွဲ လူမိုက်​​ခေါင်း​ဆောင်​ Neeraj ရယ်​ Gholumရယ်​ သုံး​ယောက်​​ပေါင်း ယုတ်​မာပြီး အဓမ္မကျင့်​ပါ​တော့တယ်​ ​နောက်​တစ်​​နေ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပချိန်​ ဖြစ်​​ကြောင်းကုန်​စင်​ကို သိသွားတဲ့ သတို့ သားနဲ့ သူ့မိသားစုဟာ Bhoomi နဲ့ သတို့သားကို သ​ဘောမတူပဲ မင်္ဂလာပွဲ ပျက်​ခဲ့ရပါတယ်​ ဖြစ်​​ကြောင်းကုန်​စင်​ကို ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်​ပြီး တိုင်​ကြား ...
Kanthaswamy (2009) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Kandhaswamy(2009) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDB Ratings:5/10 Genre:Action,Adventure Run Time:190mins Released Date:21st Aug 2009 ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ မြန်မာပြည်ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ မစိမ်းတဲ့ မင်းသားကြီး Vikram(ခါးကုန်းမင်းသား)နဲ့ မင်းသမီးချော Shriya Saranတို့ အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Robin Hood ဆန်ဆန် ရိုက်ကူးထားတဲ့ Action,Drama,Thrillerဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲသား လူဦးရေရဲ့ပြဇယားမှာ အဆင့်7 ချိတ်ပါသတဲ့ ကျိကျိတက်ချမ်းသာတဲ့လူတွေလည်း အမြောက်အများရှိပြီး လူချမ်းသာအများစုက တရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်. . . ရရှိလာတဲ့ငွေတွေကို နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေမှာ ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ deposit(ငွေသွင်း)လုပ်ထားပါသတဲ့ အဲ့ဒီလိုမတရားနည်းနဲ့ ငွေရှာပြီး ချမ်းသာနေတဲ့လူတွေကို ဆုံးမဖို့ CBI အရာရှိ(Central Bureau of Investigation)ဖြစ်တဲ့ Kandhaswamy နဲ့ သူငယ်ချင်း 11ယောက်တို့ တိတ်တဆိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့ အဖွဲ့ငယ်လေးတစ်ခုနဲ့ လူတွေအထွဋ်အမြတ်ထားတဲ့ Kandhaswamy ဘုရား အမည်နဲ့ပဲ လှုပ်ရှားကြပါတယ် မတရားနည်းနဲ့ ငွေရှာကြတဲ့ လူချမ်းသာတွေရဲ့ အိမ်တွေ ...